Guddi uu magacaabay Hogaamiyaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle si ay u soo baaraan khilaafka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa soo gabagabeeyay baaritaankooda waxayna la wadaageen warbixintooda madaxweynaha Jabuuti.
Guddigan oo la sameeyay kadib shirkii IGAD ee bishii Diseembar ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Jabuuti ayaa booqday labada dal.
Yaasiin Cilmi Buux, danjiraha Jabuuti u fadhiya Kenya, xubinna ka ah guddiga ayaa sheegay in labada dhinac ay kulmeen oo ay u warrameen madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle oo loo xilsaaray inuu soo ogaado xaqiiqda khilaafka Soomaaliya iyo Kenya.
“Guddiyadu waxay aadeen labada dal, Muqdishu waa tii ugu horeysay… dadka waan wareysanay, waxaan la kulanay madax badan, hogaamiyaasha Soomaalida, hogaamiyaasha Kenya … waxaan u geynay madaxweynaha sida aan u aragno inay haboontahay.
Bishii Diseembar ee sanadkii hore, Shir Madaxeedkii IGAD ee ka dhacay Jabuuti waxaa lagu qabtay kulan dhex maray Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya.
Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Hogaamiyaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Raysul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
XAQIIQO DEG DEG: Tirada kulamada uu ciyaaray Lionel Messi